Ghana waxay dhistay warshad tamarta cadceedda ugu weyn Afrika - Afrikhepri Fondation
Arbaco, Ogoosto 5, 2020
Ghana oo dhisi doonta warshad koronto oo ugu weyn Afrika
Lisagu Ghana wuxuu bilaabi doonaa warshad koronto ee ugu weyn qaaradda Afrika bisha Oktoobar 2015. Awoodda waxsoosaarka ee 155 Mw, oo ah waddan dhaqaalaheedu dhaqso u korayo (GDP 14% sanadkii 2011), ayaa sidaas ku dhamaan doonta dhibaatada ba’an ee ku tiirsanaanta tamarta ee ay dhowr waddan oo Afrikaan ah ku dhibaataysan yihiin.
Mashruucu shaki la'aan waa midka ugu hanka weyn qaaradda Afrika xagga tamarta qorraxda. 183 hektar oo tuulada Aiwiaso (Galbeedka Gaana) waxaa looga faa'ideysan doonaa rakibidda warshadda korantada. Fulinta mashruuca Nzema, oo lagu qiyaasay 400 milyan oo doollar (kudhowaad 306 milyan oo Yuuro), waxaa lagu aaminay shirkadda Ingiriiska ee "Blue Energy". "Nzema wuxuu si buuxda u shaqeyn doonaa sanadka 2015 wuxuuna yeelan doonaa 155 MW, taas oo ka dhigaysa mid ka mid ah tan ugu weyn adduunka maxaa yeelay kaliya seddex warshadood oo awood ayaa leh awood ka weyn tan," ayay tiri kooxda Ingriiska.
Isku soo wada duuboo, in kabadan 630.000 panelsvolvolic ayaa lagu rakibi doonaa goobta mashruuca. Nzema wuxuu leeyahay faa iidooyin kale oo dhaqaale. Sida laga soo xigtay mas'uuliyiinta Ghana, geedka wuxuu u noqon doonaa cunsur dhiirrigelin u leh shaqada Ghana. Mashruucu wuxuu abuuri doonaa 500 oo shaqo oo joogto ah iyo 200 inta lagu gudajiro dhismaha warshadda. Sida ay saxaafaddu sheegtay, 2100 shaqo oo dhaqaalaha maxalliga ah ayaa la dardargelin doonaa (hoos u dhigga hawlaha).
Xusuusin ahaan, Ghana waxay si gaar ah ugu tiirsan tahay saldhigyada korantada biyaha, taasoo u sii gudbineysa unugyada jawiga (hoos u dhaca wax soo saarka haddii ay dhacdo abaarta).
Sidee taleefannadiiagii hore dib loogu adeegsaday baararka dahabka ah
Wuxuu ku abuuraa "biyaha roobka adag" ee geedi socodka isbedel ku keeni kara beeraha
Ilaaha biyaha - Wareysi lala yeeshay Ogotemmêli (PDF)
Jacaylka iyo Kalinimada - Jiddu Krishnamurti (Audio)
Aadanaha - Dukumenti (2015)